मोबाइल उपकरणहरू सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: मोबाइल उपकरणहरू
फोन सैमसंग अनलक। बच्चाले फोनमा लक राख्नुभयो र पिन बिर्सनुभयो
कसरी एक सैमसंग फोन अनलक गर्ने। बच्चाले फोनमा लक राखेको छ र पिन कोड बिर्सियो हेलो कोड * २ 2767 * * २2878 # यो कोडले काम गर्दैन। म सैमसंग स्क्रिन लक कोड बिर्सें कसरी कोड हटाउने वा मेटाउने ...
उत्तम फोन कम्पनी के हो?
सबै भन्दा राम्रो फोन ब्रान्ड के हो? मेरो लागि, लेनोवो पहिलो स्थानमा छ, र एप्पल पछि। मसँग सामसु againstको बिरूद्ध केही छैन, तर उनीहरूको स्मार्टफोनहरू १०,००,००० टेन्ज (२० ...
कसरी सन्देशहरू असक्षम गर्ने बिलिन कसरी छ कि हरेक5मिनेट आउँदछ र फर्नू, संगीत आदि।
प्रत्येक minutes मिनेटमा आउने बेनीलाईनमा सन्देशहरू कसरी बन्द गर्ने र एउटा केट, संगीत, आदि विज्ञापन गर्ने समर्थन सेवालाई त्यहाँ कल गर्नुहोस् तपाईंले मेनुमा जानुहुन्छ, बीइन्फो खोज्नुहोस्, त्यसपछि जानकारी च्यानलहरू, ...
किन एमटीएस अपरेटरले कुनै सूचनाको सन्देश पठाउँदछ - कसलाई आवश्यक छ?
किन एमटीएस अपरेटरले कुनै सूचनाको सन्देश पठाउँदछ - कसलाई आवश्यक छ? सूचना एसएमएस र एसएमएस / एमएमएस को सेवा निषेध सेवा एसएमएस साइट सेवाबाट एसएमएस र एसएमएस / एमएमएस को स्वागत को निषेध ...
म एक धारकबाट चलचित्रहरू डाउनलोड गर्दछु र तिनीहरू ट्याब्लेटमा ध्वनि बिना
म टोरेन्टबाट फिल्महरू डाउनलोड गर्छु र तिनीहरू ट्याब्लेटमा ध्वनि बिना। एएमपी प्लेयर डाउनलोड गर्नुहोस्, यसले सबै पढ्दछ। खाम mp4 N. २264 मा फ्याक्टोरी ढाँचा वा एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि एक टेम्प्लेट, यो नि: शुल्क छ ...
मेरो खाता गुगल प्लेमा मेगफोन छ।
मेरो खाता गूगल प्लेमा मेगाफोन हो। १ सिम कार्ड एउटा सिम कार्ड भुक्तानलाई Google Play मा मेगाफोन खाताबाट हटाउनुहोस् http://chezasite.com/android/oplata-v-google-play-so-scheta-1.html १ सिम कार्ड र यसलाई प्रयास गर्नुहोस्। १ सिम कार्ड बन्द गर्नुहोस् र प्रयास गर्नुहोस्। हो स्क्रिन ...
माइक्रो एसडी फ्लैश ड्राइव कसरी अनलक गर्ने
Asya लाई माइक्रो एसडी फ्ल्यास ड्राइभ लेख्न अनलक कसरी गर्ने - म मद्दत गर्नेछु! 383 658 465 XNUMX XNUMX XNUMX तपाईको फोनलाई तपाईको कम्प्युटरमा USB- तार मार्फत जोड्नुहोस् कार्डमा जानुहोस् र त्यसपछि सबै कुरा आफैंले गर्न सक्नुहुनेछ) केवल भाई तपाईंले फर्म्याट गर्न सक्नुहुनेछ ...
फोन बन्द भएपछि मात्र चार्ज गरिएको छ? मरम्मतमा के समस्या छ उनीहरूले भने कि चार्जिंग गर्तिका साथ सबै नियमहरू। कारण थाहा छैन
के फोन बन्द हुँदा मात्र चार्ज हुनेछ? मर्मतमा के समस्या छ भनेर उनीहरूले भने कि चार्जिंग सकेटको साथ सबै नियमहरू। तिनीहरूलाई कारण थाहा छैन। केवल मर्मतका लागि हस्तान्तरण गर्न हतार नगर्नुहोस्, यस्ता चीजहरू धेरै जसो ...
राम के हो? फोनमा
र्यामको अर्थ के हो? फोन र्याममा यो र्याम हो। अपरेशनल मेमोरी। १ जीबी आजको लागि - chm को बारेमा होईन। यसबाहेक, यदि आधा भिडियो मुनि लिइएको छ। उद्देश्य भण्डारण उपकरण ...
NVIDIA SHIELD ट्याब्लेट मद्दत पुन: प्रयास गर्नुहोस्
Nvidia SHIELD ट्याब्लेट मद्दत रिफ्लैश पहिले तपाईलाई अनुकूलन पुन: प्राप्ति स्थापना गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि, पुन: प्राप्तिमा बुटि ,्ग गर्दै, तपाई PS PS लाई छाड्नुहुनेछ: र यहाँ http://forum.xda-developers.com/shield-tocolate/development/wip- twrp-2-8-0-1-अनौपचारिक- t2877117, हाम्रो फोरम छ ...।
चीनी कार्ड कसरी एसडी कार्डमा अनुप्रयोग स्थापना गर्न?
चिनियाँ आईफोनमा एसडी कार्डमा अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने? चिनियाँ क्लोनहरूमा कुनै अनुप्रयोगहरू स्थापना गरिएको छैन, नोकिया N95 आफैंमा चिनियाँ क्लोन थियो, र त्यहाँ आफ्नै आन्तरिक मेमोरीको केही पनि थिएन ...
Iphone5ले स्क्रिनलाई गाढा बनाउँछ। उच्च उज्ज्वल, छिटो यो अँध्यारो हुन्छ। के यसको बारेमा केहि गर्न सम्भव छ?
आईफोन screen स्क्रिन अँध्यारो हुन्छ। उच्च चमक, छिटो यो अँध्यारो हुन्छ। के यो आफैंमा केहि गर्न सम्भव छ? यसलाई सेवामा ल्याउनुहोस्। स्वचालित प्रदर्शन चमक समायोजन असक्षम गर्नुहोस्। यसलाई लिनुहोस् जहाँ वकिलहरू हुनुपर्दछ ...
मानिस जो एभिटोमा अनलाइन स्टोरमा आउँदैनन् - loveiphone
व्यक्ति जो एभिटोमा अनलाइन स्टोरमा आउँदैनन् - loveiphone मैले एक बर्ष भन्दा अलि पहिले एउटा आईफोन ss लिएको Savelovsky बजारमा AVITO मा। केहि महिना पछि स्क्रिन स्क्वास शुरू भयो ...
आईफोन4कसरी आईफोन 4s बाट अलग छ
कसरी आईफोन the आईफोन s एस भन्दा फरक छ एक वर्ष पुरानो, अब समर्थित छैन (आईओएसaनियमित आईफोन for को लागि जारी गरिएको थिएन), सूर्यको कमजोर स्टफिंग एकदम सरल छ - single सिंगल-कोर हो ...
एन्ड्रोइड 4.4.2 मा भाइब्रेसन प्रतिक्रिया कसरी अक्षम गर्ने?
एन्ड्रोइड 4.4.2.२ मा कम्पन प्रतिक्रिया कसरी असक्षम गर्ने? आवाजमा हेर्नुहोस्। र यसैले, कम्पन प्रतिक्रिया पहिलो रूपमा निम्नानुसार असक्षम पारिएको छ, जस्तै: सेटि / / ध्वनि प्रोफाइल, त्यसपछि तपाईंको प्रोफाइल सेट अप गर्नुहोस् र भाइब्रेसन प्रतिक्रिया चेकबक्स अनचेक गर्दै। तपाईं ...
त्यहाँ आईओएसका लागि कुनै भाइरसहरू छन्
IOS को लागी केहि भाईरस छ? दुबै मोबाईल फोन र पीसीको लागि। त्यहाँ त्यहाँ धेरै थोरै मात्र छन् र व्यावहारिक रूपमा यसलाई पक्रने कुनै संभावनाहरू छैनन्, भाइरसहरू छन्, धेरै पहिले मैले एसएमएस भाइरसको बारेमा पढें, यो आउँछ ...
फोनमा सम्पर्कहरू खोल्नुहोस्।
फोनमा सम्पर्कहरू खुल्दैनन्। इन्टरनेट बिच्छेद गर्नुहोस्, सम्पर्कहरूको ब्याकअप (यदि सम्पर्कहरू फोनमा छन्) बनाउनुहोस्। अनुप्रयोग व्यवस्थापन सेटि toहरूमा जानुहोस् - दुई अनुप्रयोगहरू "सम्पर्क" र "सम्पर्क स्टोर" फेला पार्नुहोस्। तिनीहरूमा जानुहोस् र ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 27 अर्को पाना
62 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 3,381 प्रश्नहरू।